Gimp 2.8 ayaa laga heli karaa Imtixaanka Debian | Laga soo bilaabo Linux
Gimp 2.8 ayaa laga heli karaa Imtixaanka Debian
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Aplicaciones, Naqshad, GNU / Linux
Waxaan u maleynayay inay waqti dheer qaadan doonto laakiin maya, horay ayaan ugu raaxeysan karnaa gudaha Tijaabada Debian de Cirridka 2.8, oo leh dhammaan faa'iidooyinka iyo hagaajinta uu qaybtan cusub ku jiro.
Dhamaan horumaradaas horeyba waxaan ku hadalnaa qoraalkan, iyo inkasta oo heer farsamo isbeddelo badan lagu soo kordhiyay, waxaan u maleynayaa in waxa aadka u qaddariyo adeegsadaha, ay ikhtiyaar u tahay Daaqad keli ah. Haddii aadan ku rakibnayn, waa inaad furtaa terminal oo aad dhigtaa:
ama haddii aad horey ugu haysatey kombuyuutarkaaga, ka cusbooneysii meelaha lagu keydiyo .. 😀
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Gimp 2.8 ayaa laga heli karaa Imtixaanka Debian
Had iyo jeer waxaan hubiyaa soo gelitaanka gimp-ka si aan u tijaabiyo mustaqbalkeyga Debian iyo haddii aan si sax ah u xasuusto Gimp 2.8 wuxuu tagay baaritaanka usbuucii la soo dhaafay waxaan u maleynayaa Jimcihii inaan arkay inay diyaar tahay. tijaabinaya.
Hagaag runti ma ogi haddii la heli karo ilaa usbuucii hore. Waxaan u imid inaan xaqiiqsado taas shalay ^^
Isbeddelku wuxuu u muuqdaa inuu ku taariikheysan yahay 27-ka, sidaa darteed waxay ahayd goor dambe oo Axad ah, ama horraantii Isniinta
… Kuwaas oo ah laba maalmood oo lagu daray laba maalmood oo kayar barnaamijka loogu talagalay luminta Jurassic-ka.
FYI: Xaaladda xirmada isha gimp
qaybinta tijaabinta Debian waa la beddelay.
Noocii hore: 2.6.12-1
Nooca hadda: 2.8.0-2
Taariikh: Sun, 27 May 2012 16:39:13 +0000
Waxaan jeclaan lahaa inaan arko maqaal ku saabsan Khamriga oo ku saabsan debian GNU / Linux. Dhaqdhaqaaqyo badan ayaa jiray maalmihii ugu dambeeyay nooca 1.2.3 ayaa hadda laga heli karaa labada dhinac iyo baaritaanka (Whee…), sidoo kale nooca 1.4 ayaa ah mid tijaabo ah waxaana la filayaa inuu dhinac noqdo bisha Juun.
La yaab iguma ahan wax uun u muuqday markii la siidaayay Fedora, iyadoo Gimp uu ka mid yahay calankeeda nooca 17.
Laakiin runta iyo anigu garan maayo inay sidan noqon doonto hadda ama had iyo jeer, nooca tijaabada ee Debian ayaa cusbooneysiiyay Blender, Inkscape, Scribus, MyPaint iyo hadda Gimp, marka laga reebo Krita oo si muuqata u muuqata maqnaanshaheeda, dhinaca ayaa leh kii ugu dambeeyay nooca.
Wax kasta oo la xiriira KDE waa idaha madow ee loogu talagalay Debian ... had iyo jeer way dayacan yihiin 🙁
Waa wax laga xishoodo maxaa yeelay barnaamijyada Kde way fiican yihiin, inkasta oo noocyadii ugu dambeeyay lagu dhejin karo dhinac, waxa aanan ogeyn waa haddii aan galo dambi anigoon ogeyn markii aan sid isticmaalayo, mashiinku waa iga lumay toddobaad khalad keliya ima siinin iminkana ku dhowaad dhammaan barnaamijyada aan adeegsado waxay ku jiraan tijaabooyin.
Waxaan fahansanahay in Krita ay kujirto xirmada Calligra 2.4.1 oo sideed usbuuc taagneyd.
Hagaag haa, laakiin maya, waxay kuu sheegayaan inay qayb ka tahay Calligra 2.4 isla markaana kaligaa ma soo dejisan kartid, laakiin haddii aad kaligaa rakibi karto, ku soo dhowow kde stile.
Runtu waxay tahay, sababo jira awgood inaan rakibo KDE laakiin waxaan ku dambeeyaa inaan ka saaro.
Wax la mid ah ayaa igu dhaca GNOME.
Naceybkeyga 'Kde' maahan inuu xun yahay, waa sababta oo ah sida loo kala habeeyay, qaddarka dheeriga ah iyo go'aankeeda nuqul daaqadaha, taa bedelkeeda waan jeclahay soo jeedinta asalka ah ee gnome 3 in kasta oo ay iyaduna leedahay cilladaheeda halista ah sida isugeynta kiniiniga.
Waxyar ka dib taariikhda, runtii, maxaa yeelay yaa leh shaashad taabasho, shaashad wacom, ama ugu fiican kiniin asus slate ah? aniga ujeeddadii hore waxay ahayd kiniin waxayna ka leexdeen jidka, weli waan jeclahay.
Laptop-kayga sidoo kale waa TabletPC… iyadoo la adeegsanayo wacom.
KDE 4 SC waxay raacdaa tusaalaha desktop iyo tusaalaha warqadda, sida 'desktops' kale oo badan. GNOME Shell wuxuu raacayaa sarbeebta iPod iyo qaabka "shaashadda taabashada".
Faalladaadu waa mid heer sare ah, hal eray oo ka haray ama ka maqan 😀… Waxaan ku soo qoraa barta kootada haha
Pc kaniiniga leh wacom, ma heysatid wax cudurdaar ah oo aad ku isticmaasho Kde ... Gimp iyo burushyada MyPaint wey fiicnaan doonaan Sidoo kale aragtida isbeddelka nidaamyada shaashadda taabashada, Gnome waa midka kaliya ee taagan illaa Windows 8
Asus slate ayaa dareenkeyga qabanaya processor-ka iyo wacom dartiis, laakiin markaan eegay internetka waxaan kaloo ogaaday in kiniin Android ah lagu rakibi karo Debian.
Waa salaaman tahay, halkee ayaan ka heli karnaa warqaddan dusha sare?
Ku jawaab linuxgine
Miyaad si isku mid ah u heshay xallinta sare?
dhammaan qaraarada halkan
Waan ka xumahay, waxa kor ku xusan waa astaan ​​la'aan, tani waxay la socotaa astaanta Debian hd 1920 × 1080
Waxay ahayd inaan ku codsado Ingiriis ... ok 🙂
Waan ku faraxsanahay ... waxaan hayaa cabashooyin yar lol.
1. Si aan ugu keydiyo .JPG ama .PNG, waa inaan dhoofiyaa sawirka, maxaa yeelay anigoo si fudud "Keydinaya" ama "Badbaadi ..." waxay i siisaa .XCF asal ahaan.
2. Haddii aan sawirro qaar furo, oo aan riixo batoonka si aan u xiro Gimp, dhowr sawirna ay isbadalo ku soo mareen ... Ma arag badhanka ii ogolaanaya "Xiritaanka Gimp aniga oo aan keydinin isbeddelada sawir kasta", I waa inaad ku siisaa "Xiritaan adigoon keydin" sawir kasta iyo sawir kasta oo aad furantahay.
Laakiin… raaxada Mono-Window 😀
Ma aanan ogeyn inta aan u baahanahay illaa aan ka helayo hahaha.
Iyo in Gimp, barnaamijka wax ka beddelka sawir qaadista uusan laheyn soo-bandhigid waa sida in la yiraahdo Krita barnaamijka sawir-qaadista ma laha paleetka HSV ... kuwani waa kuwa khaldan oo aanan fahmin ... inbadan oo badan oo aanan fiicnayn in aan faallo ka bixiyo si aanan u sii kordhin nacaybka aniga ii ah 😀
Hagaag, maadaama aanan ahayn naqshadeeye ... Waan ka xumahay jahliga, laakiin ma aqaano waxa bandhigani ku saabsan yahay such
Gimp Waxaan u isticmaalaa aasaasiga, sameynta qaabab fudud oo sawiro ah, jees jees ah, dalagyo, iwm ... kaalay, aasaaska 🙂
Soo-gaadhista iyo furitaanka sawirku waxay xukumaan xaddiga iftiinka, way ku kala duwan yihiin heerarka maxaa yeelay waa horumar… Hub (v )na waa midabka, dhererka iyo dhalaalka, anigu ma ihi sawir-qaade laakiin ma aqaan qof shaqeeya la'aanteed.
Waxaan horeyba gacmaheyga ugu helaaya 'Gimp', waxaan jeclahay isdhexgalkiisa, waa wax aad u dareen badan marka loo eego Krita, way ku xanuunsan tahay inaysan taageerin qaabab kale.
Mid mid ayaad u xireysaa, waxaad siin kartaa feyl / xirid wax walba. oo xiro wax walba marka laga reebo Gimp 😀
Xulashada Dhoofinta ayaa la hirgeliyay ilaa Cirridka 2.7 waxayna leedahay caqli gal in loo adeegsado habkaas. Marka aan ku shaqeyno feyl sawir ah gudaha Gimp, way ka fiican tahay ikhtiyaarka caadiga ah markaad keydineyso, ha ahaato qaabka .XCF maxaa yeelay waad dib u bilaabi kartaa mashruuca goor dambe. Sikastaba, waxaad ikhtiyaar ugu leedahay Faylka »overwrite .png ama qaabka aad isticmaaleyso, si aad u sameyso isla sidii aad ku sameysay Save ama Save As .. in Cirridka 2.6.
Wax aan jeclahay qaabkan cusub ee Gimp Waa habka loo maareeyo qoraalka markaan wax qoreyno 😀
laga heli karaa fedora?
Haa bro, waa la heli karaa;).
Perseus iyo bootie Fedora 17 ... qaabka ay ugu shaqeyso terminal waa Wanaagsan ... runti waxaan sameeyay waxyaabo aanan waligey sameyn xD axis oo aan bartay ^ _ ^
Ogsoonow in nooca kernel-ka uu yahay 3.3.7 (cajiib ah) .. Waxaan u maleynayaa inay tahay tan ugu sarreysa illaa iyo hadda .. xitaa ka sarreysa Debian ayaa leh .. haddii uusan qofna i siinin corre
Hagaag, waxaan ku jiraa 3 iyo 2, laakiin runtii waan jeclaaday sida wax walba loogu abaabulo fedora ... Kama baqayo inaan mar dambe u boodo xarunta ... Waan ogahay haddii aan rakibo Debian Testing uffff waxaan ahay qarxinaysa \_ O / .. laakiin waxa welwelka lihi waa gaabiska xirmooyinka 🙁
Laga bilaabo isla jimcaha waxaan filayaa in la heli karo. Nooca aan bogsan karin ayaa igu kalifaya inaan cusbooneysiiyo Jimcaha kadib Jimcaha. Tan iyo maalintaas waan haystaa. Maaddaama KZKG uu leeyahay, awoodda u beddelashada daaqadaha xiran waa wax laga naxo!
Lex si daacad ah, waxa kugu dhacaya ayaa ah inaad markii hore isticmaashay gnome oo aad isticmaashay kde aad u yar, maxaa yeelay waxaad dhahdaa kde isma habeynin ..., waxyaalaha dheeriga ah waa hagaagsan yihiin sababtoo ah waad joojin kartaa, ugu yaraan maahan sida gnome waa inaad ku rakibtaa 4000 kordhin si loo isticmaali karo, dabcanna waxay la qabsan kartaa daaqadaha 8, daaqadaha 8 waa chusta kale
Kde (iyo alaabteeda) waa mowduuc aad u dheer waana lama huraan in laga weecdo mowduuca asalka ah maxaa yeelay waxay leeyihiin tixraacyo ay wadaagaan.
Haddii aan si sax ah u xasuusto, desktop-kii ugu horreeyay ee aan isku dayay wuxuu ahaa Box, oo aan ku rakibo markii ugu horreysay Slackware 4 qiyaastii 98/99, ka dib waxaan isku dayay dhowr RedHat, Mandrake, iyo desktops -yadooda.
Iskuxirku waa inuu naqshadeeyaa xiriiriye muuqaal ah, liiska toosan iyo midka aan tooska ahayn, isu dheelitirka u dhexeeya walxaha kale «macquulka synoptic» ayaa muhiim u ah halabuurka saxda ah. Kde wuxuu ku salaysnaa nuqul ka mid ahaanshaha tixraacyada guuleysta, ma lahan naqshad wax soo saar, wax yar ayeyna ka tahay goob tijaabo / la adeegsadaha.
Haddii aan jeclahay Gnome 3 Shell, waa sidii aan horeyba u iri, soo jeedinteedii asalka ahayd, waxaa jira ujeedo iyo qaab dhismeed ka dambeeya khaladaadkeeda badan. Si aan khatar ugu galo badeecad cusub oo ka geddisan halista fashilaadda dhammaystiran waa mid la igu amaano
Tusaale fiican, mawduuca qoraalkan, Gimp waa oo sii wadi doonaa inuu ka caansan yahay Krita, in kasta oo farsamo ahaan ka liito, waa sababta oo ah isdhexgalka ayaa aad uga macquulsan saaxiibtinimo.